पश्चिम युरोपेली अमेरिका classicism को सांस्कृतिक विकास मा एक्स VIII शताब्दीको अन्त गरेर मूख्य कलात्मक प्रवृत्ति भयो। यो शैली सिद्ध नमूना र मानक लागि यो लिइरहेको, पुरातन समयका सम्पदा बुझाउँछ। मा साहित्य Classicism inextricably को गतिविधिहरु संग जोडिएको छ फ्रान्सेली कवि Fransua Malerba। उहाँले पद र भाषा को सुधार, धन्यवाद उहाँलाई, साहित्य मा केही कवितात्मक canons पल्टिने गर्न सुरु।
Classicism - कि एक्स आठ-एक्स म एक्स शताब्दीयौंदेखि को कला मा प्रबल एक शैली। यो प्रवृत्ति, rationality को विचार मा आधारित छ नैतिक र वीर आदर्श उदाउनु tending।
उच्च र कम: मा साहित्य Classicism दुई प्रकार मा मुख्य विधाहरू विभाजन गरेको छ। पहिलो समूह प्रसिद्ध मानिसहरू र घटनाहरूको बारेमा बताउन, कामहरू पनि समावेश छ। यी विधाहरू पनि ODE, दुःखद घटना र वीर गीत समावेश गर्नुहोस्। को protagonists यहाँ राजनीतिज्ञ, चिरपरिचित कलाकार, ऐतिहासिक वर्ण र राजा हुन् - ती मानिसहरू जसलाई बारेमा तिनीहरूले राजसी, Solemn भाषा भन्छन्। कम विधाहरू पनि bourgeoisie, तथाकथित तेस्रो एस्टेट को निजी जीवन वर्णन। तिनीहरूले हास्य, छोटो कथा, व्यङ्ग्य र लेखिएको अन्य काम गर्न स्वीकार एक संवादी शैली।
पहिलो स्थानमा साहित्य Classicism दुःखद घटना को विधा राख्छ। त्यो उहाँले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण नैतिक मुद्दाहरू पर्दाफास गर्न सक्षम छ। सामाजिक संघर्ष व्यक्तिगत चासो, नापसंद र नैतिक कर्तव्य बीच एक विकल्प सामना मुख्य वर्ण को मन, प्रतिबिम्बित गर्दै हुनुहुन्छ। कारण होसमा विरोध छ।
जीन ला Fontaine, एन Boileau र जीन-Baptiste को कार्यहरूमा classicism को अवधिमा Moliere उच्च छोटो कथा, व्यङ्ग्य र कमेडी पुग्न। महत्त्वपूर्ण दार्शनिक र नैतिक सुलझाने यी कार्यहरू आधुनिक समाज को समस्या, "कम" विधा हुन र केही नाटकीय महत्व बढाउनका बन्द।
classicism को उमेर मा गद्य काम एक विशाल संख्या सिर्जना गरियो। काम बी पास्कल, एम लाफआयेट्टे, जीन ला Bruyere र यो अवधि अन्य लेखकहरूले आवेग विभिन्न टाइप, विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण, स्पष्टता र शैली को सटीक छन्।
मा साहित्य Classicism शहरी कविता आधारभूत प्रवृत्ति झल्काउँछ। आफ्नो काम मा, लेखकहरूले, आवश्यकता मानव-नागरिक शिक्षित गर्न समाज आफ्नो कर्तव्य को मानव जगतले को कार्यान्वयन महत्त्व पाठक गर्न व्यक्त गर्न खोजे।
तपाईं classicism को मुख्य विशेषताहरु सूची गर्न सक्नुहुन्छ:
छवि र प्रकारका प्राचीन कला को काम बाट लिएको;
सकारात्मक र नकारात्मक मा वर्ण को विभाजन;
क्लासिकल काम प्लट - प्रेम त्रिकोण;
राम्रो र नराम्रो अन्तिम विजय मा सजाय छ;
तीन unities सिद्धान्त: ठाँउ र कार्य को समय।
परंपरागत, प्लट को लेखक को क्लासिक काम को आधार एक निश्चित ऐतिहासिक घटना लिए। नायक को मुख्य उत्पादन - एक virtuous व्यक्ति, कुनै पनि दोष गर्न विदेशी जो। शास्त्रीय काम राज्य गर्न rationalism र सेवा को विचार संग imbued थिए।
रूस मा, यो निर्देशन पहिलो Lomonosov कामहरू प्रतिबिम्बित छ, र त्यसपछि को काम मा विकसित भएको थियो ए Kantemir, वी Trediakovsky र अन्य शिक्षकहरूलाई। राष्ट्रिय र ऐतिहासिक घटनाहरू (ए Sumarokov, Nikolaev, जे Knyazhnin) मा आधारित विपत्ति आइलाग्यो विषयहरू र lyricism र मुख्य वर्ण को "सिङ" आफ्नो वर्तमान शैली मा। मुख्य अभिनेता सीधा र निडर भई लेखकको विचार व्यक्त। हामी भन्न सक्छौं मा रूसी साहित्य classicism satirical rebuke pathos नागरिकता एक माध्यम भएको छ।
यो निर्देशन तिर नकारात्मक मनोवृत्ति गर्न शैक्षिक विज्ञान र आलोचना मा लेख वी Belinsky प्रकाशन पछि। मात्र सोभियत अवधि, यो यसको पूर्व महत्त्व र महत्व यो शैली फर्कन सकें।
Rogozhsky चिहान। Rogozhsky पुरानो विश्वास चिहान
Banter - यो के हो?
रोजगार सम्झौता - कर्मचारी र कर्मचारी बीच आपसी समझ जग हो
रियल एस्टेट बिक्री धेरै नियम
छालामा Staphylococcus: लक्षण र उपचार
Yaroslavl मा सबै भन्दा राम्रो होटल: सस्ता, रेल स्टेशन नजिकै
रहस्यमय शब्द "पृष्ठ"। यो वास्तवमा के हो?
स्नोर्कलिङ लागि पूर्ण अनुहार मास्क: विशेषताहरु, सुविधाहरू, केही मोडेल को समीक्षा